USORO MMECHI SKYPE: ESI EDOZI NSOGBU AHỤ - SKYPE - 2019
Error Skype: mmemme mechie
Mgbe ị na-eji usoro Skype ị nwere ike izute ụfọdụ nsogbu na ọrụ, na njehie ngwa. Otu n'ime ihe kachasị iwe bụ njehie "Skype akwụsịla ịrụ ọrụ." Ọ na-esonyere nkwụsị zuru ezu nke ngwa ahụ. Nanị ihe ngwọta bụ iji mechie usoro ihe a, wee malitegharịa Skype. Ma, ọ bụghị eziokwu na oge ọzọ ị malitere, nsogbu ahụ anaghị eme ọzọ. Ka anyị chọpụta otú ị nwere ike isi wepụ njehie ahụ "Usoro mmemme ahụ kwụsị" na Skype mgbe ọ na-emechi ya.
Otu n'ime ihe ndị nwere ike ime ka njehie na njedebe Skype nwere ike ịbụ nje. Nke a abụghị ihe kachasị emetụta, ma ịkwesịrị ịlele ya na mbụ, n'ihi ọrịa nje nwere ike ịkpata nsogbu dị njọ maka usoro a dum.
Iji chọpụta kọmputa gị maka ọnụnọ nke koodu ọjọọ, anyị na-eji ya eme ihe na-eme ka nje virus kwụsị. Ọ dị mkpa ka a jikọta ọrụ a na ngwaọrụ ọzọ (anaghị ebute ya). Ọ bụrụ na ịnweghị ike jikọọ kọmputa gị gaa na PC ọzọ, jiri ọrụ ahụ na mgbasa ozi nke na-arụ ọrụ n'enweghị nrụnye. Mgbe ịchọta egwu, soro ntuziaka ndị usoro ahụ ji eme ihe.
N'enyeghị oke, antivirus n'onwe ya nwere ike ịbụ ihe kpatara mberede shutdown nke Skype, ma ọ bụrụ na usoro ndị a na-esere ibe ha ọgụ. Iji chọpụta ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ahụ, wepụ oge nwa oge iji nweta nje virus.
Ọ bụrụ na nke a gasịrị, mmemme nke Skype agaghị amalite, mgbe ahụ ma gbalịa ịhazi antivirus nke mere na ọ dịghị esere Skype (ṅaa ntị na ngalaba ndị ọzọ,) ma ọ bụ gbanwee ọrụ antivirus na onye ọzọ.
Hichapụ faịlụ nhazi
N'ọtụtụ ọnọdụ, iji dozie nsogbu na nkwụsị mberede nke Skype, ị ga-ehichapụ faịlụ nhazi ahụ shared.xml. Oge ọzọ ịmalite ngwa ahụ, a ga-akpọghachi ya ọzọ.
Nke mbụ, anyị mechiri Skype.
Ọzọ, site na ịpị bọtịnụ Win + R, anyị na-akpọ windo "Run". Tinye iwu:% appdata% skype. Pịa "OK".
N'otu oge na Skype ndekọ, chọọ faịlụ shared.xml. Họrọ ya, kpọọ menu ndị dị na gburugburu, pịa bọtịnụ òké aka nri, na ndepụta nke gosipụtara, pịa ihe "Hichapụ".
Ụzọ kachasị mma iji kwụsị ịhapụ Skype kpamkpam, bụ ntọala zuru ezu nke ntọala ya. Na nke a, ọ bụghị naanị faịlụ shared.xml ahụ na-ehichapụ, kamakwa dum Skype nchekwa na ebe ọ dị. Ma, iji nwee ike iweghachite data, dịka ọmụmaatụ ozi, ọ ka mma ka ị ghara ihichapụ folda ahụ, kama ịnye ya aha ọ bụla ị chọrọ. Iji nyegharịa nchekwa Skype, gaa na ndekọ ndekọ nke faịlụ shared.xml. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ niile naanị mgbe Skype kwụsịrị.
Ọ bụrụ na aha ederede anaghị enyere aka, enwere ike ịdeghachi folda ahụ na aha mbụ.
Melite ihe Skype
Ọ bụrụ na ị na-eji nsụgharị nke Skype, mgbe ahụ ma eleghị anya na-emelite ya gaa na nke kachasị ọhụrụ ga-enyere aka dozie nsogbu ahụ.
N'otu oge ahụ, mgbe ụfọdụ, ezughị okè na mbipụta ọhụrụ ahụ bụ ụta n'ihi mberede Skype. N'okwu a, ọ ga-abụ ihe ezi iji wụnye skype site na mbipụta ochie, ma chọpụta otú usoro ahụ ga-esi arụ ọrụ. Ọ bụrụ na nbibi ahụ kwụsịrị, jiri ochie mbipụta ruo mgbe ndị mmepe dozie nsogbu ahụ.
Ọzọkwa, ị ga-eburu n'uche na Skype na-eji Internet Explorer arụ ọrụ ya. Ya mere, n'ihe gbasara mberede Skype, ị ga-enyocha ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji mbipute agafeghị aga, ị kwesịrị ịkwalite IE.
Dịka e kwuru n'elu, Skype na-arụ ọrụ na engine IE, ya mere enwere nsogbu na ọrụ ya nwere ike kpatara nsogbu na ihe nchọgharị a. Ọ bụrụ na imelite IE adịghị enyere aka, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume iwepu ihe IE. Nke a ga-anapụ Skype nke ụfọdụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, isi akwụkwọ ahụ agaghị emeghe, ma, n'otu oge ahụ, ga-ekwe ka ị rụọ ọrụ na usoro ihe omume ahụ n'enweghị ọpụpụ. N'ezie, nke a bụ ihe ngwọta na-adịghị adịte aka. A na-atụ aro ka ị weghachite ntọala mbụ ozugbo ndị mmepe nwere ike idozi nsogbu nsogbu IE.
Ya mere, iji wepụ ọrụ nke IE na Skype, nke mbụ, dị ka ọ dị na mbụ, mechie usoro a. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-ehichapụ ụzọ mkpirisi Skype niile na desktọọpụ. Mepụta aha ọhụrụ. Iji mee nke a, gafee onye na-eme nchọpụta gaa na adreesị C: Program Files Skype Phone, chọta faịlụ Skype.exe, pịa ya na òké, site na omume ndị dịnụ họrọ ihe "Mepụta ụzọ mkpirisi".
Ọzọ, laghachi na desktọọpụ, pịa ụzọ mkpirisi ọhụrụ e kere eke, ma na listi họrọ ihe "Njirimara".
Na taabụ "Label" na akara "Ihe" anyị gbakwunye uru / legacylogin na ntinye dị ugbu a. O nweghị ihe ga-ehichapụ ma ọ bụ hichapụ. Pịa bọtịnụ "OK".
Ugbu a, mgbe ịmalitere usoro ihe a site na ụzọ mkpirisi a, ngwa ahụ ga-amalite n'enweghị òkè nke IE components. Nke a nwere ike ịbụ ngwọta na-adịru nwa oge maka nsogbu nke nkwụsị na-atụghị anya ya na Skype.
Ya mere, dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ihe ngwọta ole na ole maka nsogbu nke Skype. Nhọrọ nke otu nhọrọ na-adabere n'ihe kpatara nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmepụta ihe kpatara nsogbu ahụ, jirizie usoro niile n'aka, rue mgbe normalization nke Skype.